Umbani Ibhokisi Imidlalo, top slot indawo oluqalisa entsha isiqophi slot Panda Pow. Lokhu slot kuyinto ezinhlanu itolitji amabili nanhlanu pay emigqeni esisodwa. Kusekelwe isihloko ikhathuni Chinese 'Kung-fu bear'.The slot inikeza esiyingqayizivele ibhonasi sici esinika kuze kufinyelele 20 osebenzisa free e ekuqaleni kodwa khona kabusha inhlamvu sici okuyinto onganikeza kuze kufinyelele 40 osebenzisa free kwenza kube imali eningi nakakhulu. Omunye Kufanele futhi ufune fabulous igolide panda ku itolitji okuyinto get embondelene ukwenza win omkhulu. Uma uthanda usuhamba Slots esisha kusukela top slot site ke lokhu slot kufanele ngempela zonke penny ukugembula.
I ngokugqamile, Kung-fu-onothando, bear cartoonish ithatha eshashalazini ku Panda Pow ezihlinzekwa phezulu slot indawo 'Lightning Ibhokisi Imidlalo'. Kulesi game, umdlali bangadlala inani lemali elincane £ 0.25 spin ngayinye kanye lemali £ 1000,00 spin ngayinye. Futhi, omunye ungalungisa ububanzi uhlamvu lwemali kwibanga ubuncane £ 0.30 zemali emugqeni ukuze £ zemali 100 emugqeni. It has a ukubuya iphesenti umdlali we 95-97%.
Uyini Ngakho abahlukile?
Thina njalo ilukuluku ukwazi imiklamo okubonakalayo itolitji akhiwa phezulu slot indawo i.e Lightning Ibhokisi Imidlalo. Yabo entsha isiqophi slot Panda Pow yiyona kwalokho zakamuva kulolu hlu futhi yazuza ukuqashelwa omkhulu phakathi abadlali yekhasino. I itolitji kahle kakhulu setha yonkana okwasemuva ezijulile obomvu ehlotshiswe Chinese isitayela umbhalo.
Abadlali kumele uzibheke lezi zibani, abalandeli kanye igolide, njengoba yilowo nalowo kubo inikeza izinkokhelo up bafinyelela ezinkulungwaneni zemali payline ngamunye. Zonke lezi izimpawu uma belekelelwa yegolide kungandisa ambikele ukuze coins.The uphawu ezingamakhulu amabili yiziphazamiso ezihehayo kakhulu aphume izimpawu ejwayelekile kuyinto panda ingane- uhlezi phezu egatsheni lesihlahla. Lolu phawu ungathola nawe 2, 5, 50, 125 noma 500 zemali uma umdlali uyakwazi umhlaba eyodwa, ezimbili, ezintathu, ezine noma ezinhlanu kwenye 25 akhokhe imigqa umdlalo.
Panda futhi Mahhala osebenzisa
Omunye uphawu ahehe yalolu umdlalo panda yesibili- ogqoke yibhande lasebunzini phakathi abomvu. Kusebenza njengomnyombo zasendle kanye uphawu chitha futhi kungaba ithathe zonke ezinye izimpawu. Ngaphezu kwalokho, futhi kungasiza ukwenza kusebenze khulula ibhonasi sici. Kungaba kuphela umhlaba 3 itolitji phakathi ungakheka inhlanganisela yokuphumelela ngoba inqobe omkhulu. Landing ayisihlanu noma ngaphezulu lokhu kungaba kusebenze khulula ibhonasi sici futhi lapho abadlali anikezwa kanje-
5 osebenzisa free for 5 panda osakaza.
8 osebenzisa free for 6 panda osakaza.
12 osebenzisa free for 7 panda osakaza.
15 osebenzisa free for 8 panda osakaza.
20 osebenzisa free for 9 panda osakaza.
Futhi, eyodwa kalula ubone uphawu entsha embondelene – Golden Panda sengezwe itolitji ku osebenzisa free. Lolu phawu ibonakala embondelene ngokugcwele lapho umdlali hits phezu itolitji 2, 3, 4 futhi 5. Ngaphezu kwalokho, ukuze yakha inhlanganisela yokuphumelela, lolu phawu kungaba indawo yabo bonke abanye uphawu ngaphandle chitha. Landing amaningi wabo ku spin efanayo, umuntu angazuza umvuzo omkhulu.
Panda Pow ngu phezulu slot indawo i.e Lightning Ibhokisi Imidlalo kugcwalise njalo okulindelwe abathandi slot. Nge ekhethekile ibhonasi sici, lo mdlalo uye waba ngempela umlutha. It has ukuhluka nokulinganisela eyodwa bangalindela ukuba uthole esiphezulu of afinyelela ku 500 × of esigxotsheni. Umbani Ibhokisi ikufakazele ngokucacile njengoba phezulu slot kusayithi ekuvuleni le game ethokozisayo! Lihlole zethu ngokwakho!